Hargeysa: Magacyada Dhimashada iyo Dhaawaca ka dhashay Roobkii Galabta, Maayarka caasimadda oo ka hadlay iyo Madaxweyne Siilaanyo oo Cusbitaalka Guud Booqday | Somaliland Post
Home News Hargeysa: Magacyada Dhimashada iyo Dhaawaca ka dhashay Roobkii Galabta, Maayarka caasimadda oo...
Hargeysa (SLpost)- Ilaa inta la xaqiijiyey Saddex Qof, ayaa ku geeriyooday Roobab Dabayl watay oo galabta ka da’ay magaalada Hargeysa, halka dhaawacuna ka yahay 17 Qof, sida uu sheegay Maamulka Cusbitaalka guud ee Hargeysa.
Maamulka Cisbitaalka guud ee Hargeysa, ayaa Warbaahinta u sheegay in tirada dadka dhintay ee la soo gaadhsiiyey Cusbitaalka yihiin saddex Ruux oo mid ka mid ahi Haweenay tahay iyo 19 Qof oo Dhaawac ah oo iyagu Cusbitaalka lagu dawaynayo, waxaana dadka dhaawaca Cusbitaalka Guud ku booqday Madaxweynaha Somaliland Md Axmed Maxamed Siilaanyo iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa.
Madaxweynaha Somaliland Axmed-Siilaanyo oo ay isaga iyo Masuuliyiin kale ku booqdeen Dadka Roobka ku dhaawacmay Cusbitaalka guud ee Hargeysa, ayaa qof qof u dul istaagay Dadka dhaawacyada ah ee Cusbitaalka Jiifay, waxaanu Allaah uga beryey inuu u fudaydiyo dhaawacyadaas. Waxaanu Warbixin ka dhegaystay Maamulka Cusbitaalka iyo Wasiirka Caafimaadka oo sheegay in Dadka dhaawacmay intooda badani ay sahlan yihiin, balse dhawr qof culus yihiin.
Sidoo kale Roobabka ayaa khasaare gaadhsiiyey ilaa Boqol Guri oo ay Fooqyo ku jiraan, sida uu Xaqiijiyey Maayerka Caasimadda Somaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan-Soltelco.
DAAWO MUUQAALKA MADAXWEYNAHA OO CUSBITAALKA GUUD KU BOOQDAY DADKA DHAAWACA AH IYO MASUULIYIIN KA HADASHAY KHASAARAHA ROOBABKU SABABEEN
Maayerka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid (Soltelco) oo Saxaafadda la hadlay caawa, ayaa sheegay inay diiwaangeliyeen dhimashada laba qof oo uu ku soo dumay dhismaha Guri Fooq ah oo laga dhisayey Xaafadda New Hargeysa, halka uu xusay in 14 Qof oo kale ay dhaawacmeen.
Sida ay warbaahintu ka heshay Maamulka Cusbitaalka Guud , waxaanu halkan idinku soo gudbinaynaa liiska magacyada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay Roobka Dabaysha Watay ee galabta ka da’ay Hargeysa.
Marxuum Salaad Geelle (Dhimasho)
Marxuum Faysal Ishaar Cumar (Dhimasho)
Marxuumad Haweenay (Ina Jaamac Furre) (Dhimasho)
Samiira Jaamac Xasan ( Dhaawac)
Samiira Cabdi Muxumed (Dhaawac)
Maxamed Yuusuf Aadan (Dhaawac)
Maxamed Cabdilaahi Bureed(DHawaac)
Jaamac Cabdi Maxamed (Dhaawac)
Cabdiraxmaan Xasan Khaliif (Dhawaac)
Siraad Cali Cabdi (Dhawaac)
Mahad Mawliid Cige( Dhaawac)
Mustafe Nuur Axmed (Dhaawac)
Xariir Nuur Axmed (Dhawaac)
Siraad Cali Cabdi (Dhaawac)
Axmed Yuusuf Xasan (Dhaawac)
Sidiiq Xuseen Nuur(Dhaawac)
Canab Cismaan Cabdi (Dhawaac)
Jawaahir Cabdi Muuse (Dhawaac)
Kawsar Maxamed Aamiin (Dhawaac)
Xaliimo Suudi Aadan (Dhawaac).
Roobkan oo Dabayl watay, ayaa da’ay bilaabmay abbaaro 5:15 daqiiqo ee saacadda Geeska AFrika, waxa uu sidoo kale magaalada Hargeysa ku sababay in qaybo ka badan oo xaafadaha ka mid ah ay caawa bilaa koronto yihiin ka dib markii uu Xadhkaha Dabka xambaara iyo Tiirarka ay ku gudbiyaan Shirkadaha Kooraanka Shida uu Roobku dumiyey.
DAAWO MUUQAALKA WARBIXIN TELEFISHANKA HCTV KA DIYAARIYEY MASHAQADA ROOBKU SABABAY